၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသများမှ ထွက်ရှိသောသစ်များအားပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း
Export Marketing & Milling DepartmentOpen Tender Sales Notice 26-3-2018
Export Marketing & Milling Department- Open Tender Sale Notice - 23-3-2018.
Export Marketing & Milling Department- Special Open Tender Sale Notice - 23-3-2018
၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသများမှ ထွက်ရှိသောသစ်များအားပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမဝင်သစ်များကို ဥရောပစျေးကွက်သို့ တင်သွင်းရောင်းချသည့် ပြည်ပသစ်ကုမ္ပဏီများအား ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့်သစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသည့် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် (MTLAS – Myanmar Timber Legality Assurance System) ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသောစနစ်အရ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချခဲ့သော နိုင်ငံခြားတင်ပို့သည့် သစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သစ်တောဧရိယာမှ ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်၍ တရားဝင်သစ် ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေရာပေါင်းစုံမှ သစ်များအား သစ်ဆိပ်နှင့်သိုလှောင်သည့်နေရာများတွင် စုပုံရောထွေးထားခြင်း၊ စက်ရုံများ အတွင်း၌လည်း မည်သည့်နေရာမှ လာရောက်သည့်သစ်များဖြစ်ကြောင်း သီးခြားစီခွဲခြားထားသည့် စနစ်မရှိ သောကြောင့် သစ်လွှဲပြောင်းကွင်းဆက် (Chain of Custody – COC) အား စာရွက် စာတမ်း မှတ်တမ်းကိုအခြေခံ၍ သစ်အားလုံးအား စိစစ်ရန် အကန့်အသတ်အချို့ ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့အနေဖြင့် လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသည့်စနစ်များအား ပိုမိုကောင်း မွန်အောင် မြန်မာ့သစ်များ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber Legality Assurance System – MTLAS) တစ်ရပ်ဖော်ဆောင်ရန် FAO နှင့် EU တို့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် နိုင်ငံတကာ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကွာဟနေမှု၊ လိုအပ်နေမှုများ (Gap Analysis) အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၆−၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တစ်နှစ်ရပ် ဆိုင်းခဲ့ပြီး မြန်မာ့သစ်များ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber Legality Assurance System – MTLAS) ကို နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကွာဟနေမှု များအား လေ့လာဆန်းစစ်ချက်မှ တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံ၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်အညီ အပြည့်အဝလိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားတင်ပို့သူများ အနေဖြင့် တင်ပို့သည့်သစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးတင်ပို့ နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝယ်ယူသူများအား ရှင်းလင်းစွာ သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် သစ်ထုတ်လုပ်ရန် လျာထားသည့်ပမာဏကို လည်း လက်ရှိတွက်ချက်ထားသည့် နှစ်စဉ်တောထွက်ပမာဏ (Annual Allowable Cut-AAC) ၏အောက် သိသိသာသာလျှော့ချ၍ AAC ၏ ၅၀% ခန့်သာ ထုတ်လုပ်သွားရန် လျာထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လျှော့ချထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် မိမိတို့၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေ မည်ဖြစ်ပါသည်။
တရားဝင်သစ် (Legal Timber) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်သော ဖမ်းဆီးရမိသစ်များ ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း လုံးဝခွင့်မပြုဘဲ ပြည်တွင်းသုံးအဖြစ်သာ အသုံးပြုစေခြင်းဖြင့်လည်း မြန်မာ့ သစ်များ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber Legality Assurance System – MTLAS) ကို ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber Legality Assurance System – MTLAS) အား ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်အဆင့်အဖြစ် “သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆန္ဒအလျောက် လက်မှတ် (FLEGT Voluntary Partnership Agreement-VPA) ထိုးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးကြီးသည့် ပထမအဆင့် ခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်။
© 2018 Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.